Survey: 3 out of 4 US adults plan to travel at least once in next six months | USA News
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba Zokuhamba e-USA » Uvavanyo: Abantu aba-3 kwaba-4 base-US baceba ukuhamba kube kanye kwiinyanga ezintandathu ezizayo
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba zesikhululo senqwelomoya • Iindaba zeAnga • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • omnye • ukwakha uhambo kwakhona • Ukulinganiswa kweeholide • Iindaba ezijongene noKhenketho • Iindaba zoKhenketho • Intetho yezoKhenketho • Iindaba zothutho • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ze-USA
Uvavanyo: Abantu aba-3 kwaba-4 base-US baceba ukuhamba kube kanye kwiinyanga ezintandathu ezizayo
Injongo yokuthatha iholide kwezi nyanga zintandathu zizayo inyuke kakhulu, nge-72% yabantu abadala base-US abaceba ukwenza njalo-ukusuka kuma-62% abhalwe ngexesha lophando lokugqibela olwenziwe ngoFebruwari 2021.
Ukutsiba kwiinjongo zokuhamba kwaqwalaselwa kuzo zonke izizukulwana ngaphandle kweGen Z
Ukunyuka okukhulu kweenjongo zokuhamba kwiinyanga ezintandathu ezizayo kuphakathi kweBoomers, inyuka ukusuka kwi-54% ukuya kwi-70%
Ngaphezulu kwaba-2 kwaba-5 kubahambi abazimisele ukuthatha iholide eyahlukeneyo phakathi kweenyanga ezili-12 ezizayo
Iziphumo zophando lwakutshanje lwabahambi baseMelika zikhutshwe namhlanje. Ingxelo ichaza ngokweenkcukacha indlela umdla wabemi baseMelika kukhenketho lokuzonwabisa olukhule ngokukhawuleza njengoko iyeza lokugonya sele lifumaneka ngokubanzi kwaye ithi izithintelo ezinxulumene ne-COVID-19
Injongo yokuthatha iholide kwezi nyanga zintandathu zizayo inyuke kakhulu, nge-72% yabantu abadala base-US abaceba ukwenza njalo-ukusuka kuma-62% abhalwe ngexesha lophando lokugqibela olwenziwe ngoFebruwari ka-2021. ngaphandle kukaGen Z, owayesele ebonakalisile inqanaba eliphezulu leenjongo kuvavanyo lokugqibela.
Ukunyuka okukhulu kweenjongo zokuhamba kwiinyanga ezintandathu ezizayo kuphakathi kweBoomers, inyuka ukusuka kwi-54% ukuya kwi-70%. Oku ayothusi into yokuba iBoomers ibiphakathi kwabantu baseMelika bokuqala ukuba banofikelelo kwizitofu kwaye banokonga ukuhlawulela iihambo. Phantse kwisiqingatha (44%) sabo bonke abakhenkethi abakhutheleyo abaphononongiweyo sele befumene isitofu sokugonya se-COVID-19, esinezinga eliphezulu lokugonya phakathi kweBoomers (74%), kunye noGen Xers abalandela kude kangange-37%.
Ngokugonyelwa ootatomkhulu, kwaye abazali nabantwana ngaphezulu kwe-12 ngoku belandela ngoku, isaveyi ibonisa ngaphezulu kwabahambi aba-2 kwaba-5 bazimisele ukuthatha iholide yezizwe ngezizwe (okt, iholide ebandakanya ngaphezulu kwezizukulwana ezibini zabahambi) kwiinyanga ezili-12 ezizayo (43 %).
Iidili zokuHamba kunzima ukuZifumana
Ngokwehla okungathethekiyo kukhenketho kulo nyaka uphelileyo, abathengi bebelindele ukufumana izithembiso ezikhuthazayo kunye nezaphulelo. Nangona kunjalo, ukwanda kweemfuno zokuhamba zokuzonwabisa kukhokelele kwimfuno eqinileyo yeempelaveki kunye nokusilela kwempahla ekhoyo. Oku kudale imeko kwiimarike ezithile apho iMMGY Travel Intelligence ibiza "ukubuyela umva uxinzelelo," apho iimfuno zolonwabo zempelaveki zinyanzelisa abahambi ukuba baqwalasele uhambo lweveki njengenye indlela.
Bayakuya phi kwaye njani?
Uhambo lwasekhaya luya kuqhubeka nokulawula indawo yokuhamba ngo-2021, ngoJuni nangoJulayi ziinyanga ezithandwayo zokuhamba. Amashumi amahlanu anesixhenxe eepesenti abahambi bachaza ukuba bathathe uhambo kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo, ngelixa iipesenti ezingama-76 bezimisele ukuthatha enye kwiinyanga ezili-12 ezizayo. Iziganeko zokuthatha uhambo zendlela ziphezulu phakathi kweMillennials (79%) kunye noGen Xers (79%) kunye nabo banabantwana (82%), uninzi (84%) lwabakhweli beendlela ababonisa ukuba bazakuqhuba ezabo izithuthi.
Izizathu zokuthatha uhambo lwendlela ziyahluka kwizizukulwana ngezizukulwana. I-Gen Zs kunye neMillennials zikhuthazwa ngamaxabiso asezantsi eeholide, ngelixa uGen Xers ethanda ukubanakho ukuzenzekela. I-Boomers iyakuxabisa ukuba bhetyebhetye kokupakisha yonke into efunekayo kwiimoto zabo.
Ngelixa iindawo ezininzi zokuhambela emakhaya zivuleka kwakhona, ukubakho kunye nomdla wokuhamba kwilizwe liphela wehlile nangona kukho ukwanda okubonakalayo kokhuseleko. Oku kunganxulunyaniswa nokungaqiniseki kokuhamba kumazwe aphesheya ngoku. Nangona kunjalo, njengoko iindawo zamazwe aphesheya ziqala ukuvula kubakhenkethi bamanye amazwe kwaye izithintelo zincitshisiwe, kukho ulindelo lokuba iinjongo zokuhamba zamanye amazwe ziya kuqala ukubona ukuvuseleleka kwiinyanga ezizayo.